KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): အမယ်အိုတစ်ဦးအား အဓမ္မပြုကျင့်သူ လူငယ် ဖမ်းဆီးခံရ
အမယ်အိုတစ်ဦးအား အဓမ္မပြုကျင့်သူ လူငယ် ဖမ်းဆီးခံရ
Submitted by admin on Friday,3June 2011--
ဇွန်လ ၃ရက်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဟောင်ဆောင်ခရိုင် မယ်လအူးဒုက္ခသည်စခန်းမှ အသက် ၆၁နှစ်အရွယ် အမယ်အို အမျိုးသမီးတစ်ဦး အား မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့သူ အသက် ၂၆နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦးကို စခန်းတာဝန်ခံများက ဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အမျိုးသမီးကြီးမှာ ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၂၄ရက်နေ့က မယ်လအူးစခန်းနံဘေးရှိ မိုင်းလုံးကြီးချောင်း(မဲ့စရင်းချောင်း) အောက်ဘက် မနီးမဝေး ကေးချောအေ့နေရာတွင် ညနေ ၂နာရီကျော်၌ ငါးမျှားနေစဉ် လူငယ်တစ်ဦးက ရောက်လာ၍ အတင်း အဓမ္မ ပြုကျင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မယ်လအူးစခန်း ဥက္ကဌ စောကော်ဝါးက “ကျနော်တို့ လုံခြုံရေးတွေရဲ့ မေးမြန်းချက်အရ အဲဒီအဘွားပြောတာက သူ ငါးမျှားပြီး လို့ ကမ်းပေါ်မှာတက်လာတဲ့အချိန် အဲဒီလူငယ်က သူတို့ ကမ်းအောက်ကို အတင်းဆွဲခေါ်သွားပြီး လည်ကိုစေ့ပြီးတော့မှ မုဒိမ်း ကျင့်တာ။ အဲဒီလူငယ်ကလည်း သူ ကျူးလွန်တာကို မှန်ကန်ကြောင်း ဖြောင့်ချက်ပေးတယ်။ စခန်းမှာ ဒီလိုမျိုး ကြီးမားတဲ့ ပြစ်မှု ကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေကိုတော့ ကျနော်တို့ကတော့ လုပ်သင့်တာကို ဆက်လုပ်သွားရမှာပဲ။”ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ လူငယ်ကို မယ်လအူးစခန်း လုံခြုံရေးရုံးတွင် ထိန်းသိမ်းထားပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းဆိုင်ရာ ထိုင်းအာဏာပိုင်များထံ အပ်နှံသွားကာ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဥပဒေအတိုင်း အရေးယူ အပြစ်ပေးသွားဖွယ်ရှိကြောင်း သူက ပြောသည်။
မယ်လအူးစခန်းမှ ဒုက္ခသည်တစ်ဦးဖြစ်သူ စောစိုးကလည်း “ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ လုံးဝ မဖြစ်သင့်တဲ့ဟာပဲ။ ဒီအဘွားက ငါး မျှားတာ သူ့ဝါသနာပဲ။ လူတွေက သူ့ကို ဖီးတခွဲညာ့(ငါးမျှားတဲ့အဘွား)လို့ ခေါ်ကြတယ်။ အဲဒီသူ ငါးမျှားနေကျနေရာမှာပဲ အဓမ္မ ပြုကျင့်ခံရတာ။ စခန်းအတွင်း ဒီလိုအမှုတွေက ဖြစ်ခဲတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တော့ ကျနော်တို့လည်း စိတ်မကောင်းဘူး။”ဟု ပြောဆို သည်။
ယခုလိုဖြစ်ရခြင်းမှာ မယ်လအူးစခန်းအတွင်း လူမှုရေးအသိပညာပေးမှုများ နည်းပါးနေသေးသည့်အတွက် ယခုလို ပြစ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်နောင် အလားတူ ပြစ်မှုများ မဖြစ်ပွားအောင် ယခုထက် ပို၍ အသိပညာပေးမှုများ လုပ်ဆောင် သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း စခန်းတာဝန်ရှိသူများက ပြောဆိုကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလအကုန်၌လည်း မယ်လအူးစခန်းမှ အသက် ၁၇နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်၊ မဲ ဟောင်ဆောင်ခရိုင် ထိုင်းဘက်ခြမ်းရှိ သံလွင်မြစ်ကမ်းပါး သောလယ်ထာ့ရွာမှ အမျိုးသားသုံးဦးက ထီးလော်သေ့ရွာတစ်နေရာ တွင် အဓမ္မပြုကျင့်မှုသည့် ကိစ္စတခု ဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်။
ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် လူသတ်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ လူကုန်ကူးမှုနှင့် မုဒိမ်းမှု စသည့် ရာဇ၀တ်မှုများကို စခန်းလုံခြုံရေးက ထိုင်း အာဏာပိုင်များထံ အပ်နှံလေ့ရှိသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 9:19 AM
▼ 2011 (2359)
▼ 06/05 - 06/12 (81)
နေပြည်တော် အနီး ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ ရထားဗုံးပေါက်ကွဲမှုမ...
မြိုင်ကြီးငူတိုက်ပွဲနဲ့ သူတို့အမြင် (ရုပ်သံ)
ကရင်လူထုက ဒေါ်စုကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံတယ်
Burmese government blames KNU for bomb on Rangoon-...
Some women were put in front of the government tro...
ကရင်တပ်ဖွဲ့၏ ချုံခိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အစိုးရစစ်တ...
တောင်ပေါ်ကားလမ်း မြေပြို၍ မြ၀တီ-ကော့ကရိတ်ကားများ လမ...
KIA က မြန်မာတပ်အရာရှိ ၂ ဦး ပြန်လွှတ်ပေး
ကချင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှင့် အစိုးရတပ် စစ်ရေး ဆက်တင...
အစိုးရ တပ် စစ်သုံ့ပန် ဥပဒေချိုးဖောက်
ကရင်တစ်ယောက်သေရင် ပြည်တွင်းစစ်မီးဟုန်းဟုန်း တောက်ေ...
ပဲခူး ကျောင်းသားငယ် ဓာတ်လိုက် သေဆုံး
တော်လှန်ရေးသမား ၃၄ ဦး KNU ဂုဏ်ပြု
ထိုင်း၊ မြန်မာ ဒုက္ခသည်စခန်း လူစာရင်းကောက်ခံမှု ကူညီ...
ဒေါ်လာ ဈေးတွေ ကျပြီးရင်း ကျအုံးမှာ လား မြန်မာ့စီးပ...
မြန်မာ သတင်း တိုတိုထွာထွာ ထင်ရာမြင်ရာ ကြားရနားဝ ဝယ...
အခမဲ့ ပညာရေးစနစ် ပြဌာန်းချက်နှင့် လက်တွေ့ ကွာခြားေ...
Karen News' videos Enemies of the State
မာနယ်စိုး စစ်ဆင်ရေး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
မိုးတွင်းကာလ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ၏ အထူးစစ်ဆင်ရေးကို ကရင်...
ရထားဗုံးခွဲသူမှာ KNU အဖွဲ့ဝင်ဟု စွပ်စွဲ
Karen youth urged to shoulder burden of cultural p...
နွားကျောင်းသားများ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် အလုပ်ရမည...
ဖားရိုက်ထွက်တဲ့ သားအဖ သုံးယောက်ကို မြန်မာ စစ်တပ်က ...
KNU တပ်မဟာ (၆) မှ စစ်ဆင်ရေး တိုးချဲ့လာခြင်း
နှင်းပန်းအိမ် နှင့် ဧရာဝတီ Face to Face အစီအစဉ်(ရု...
ဂျပန် ဓါတ်ရောင်ခြည် မူလမှန်းထားတာထက် နှစ်ဆဆိုးဝါး
ချည်ဖြူဖွဲ့ မင်္ဂလာ သီချင်းသစ် မကြာခင် ကျရောက်လာမည့်...
မြန်မာ စစ်အာဏာရှင်ကြီးများရဲ့ မြေအောက်ပုန်ကျင်းမျာ...
မနားတမ်း စီးဆင်းသွားနေမဲ့ စမ်းချောင်းတခု
ကရင်ပြည်နယ် ထိုးစစ်အတွက် မြန်မာစစ်တပ် စတင် တပ်စွဲ
မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ကရင်တပ်ဖွဲ့ တိုက်ပွဲကြား ဒေသခံမျ...
Wall St. losing streak continues (02:03) Report
နေ့ စဉ်သတင်း -7June 2011
နိုင်ငံအသီးသီးသို့ ရောက်ရှိနေသော ကရင်လူငယ်များအား ...
ဦးတေဇပြောတဲ့ ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှု၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန...
1,000 BGF troops join forces with Karen army
Rain and coldacrisis for new refugees
Update No.75: June 2nd 2011 – 10:40 am One village...
HEMICAL SHELLS AT KAW MOO RAH
Being honest about using CW
ကျေးရွာသားများကို စစ်တပ်ရှေ့ပြေး အကာကွယ်အဖြစ် အသုံ...
ကျောင်းနှင့် ဆေးခန်းအတွက် ဆိုပြီး အာဏာပိုင်များက မ...
နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်ဘူတာများ ဗုံး ပိုက်စိတ်တိုက...
စစ်ဘက် အရာရှိနှင့် အချင်းများမှု လူငယ်တဦး ဒဏ်ရာရ
ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးရုံးများမှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏...
လူစိတ်မရှိသော စစ်ခွေးနအဖ၏ ယုတ်မာရက်စက်မှု
KNU urges commission of inquiry on Burma war crime...
Envoy urges action to end rights abuses in Karen S...
မြန်မာမှ အဆင့်မှီ လေဆိပ် တစ်ခုတွင် ဘီးလေထိုးစက်မရှ...
မြန်မာစာပေဟောပြောပွဲ တောင်ကိုရီးယားမှာ ကျင်းပ
ဇွန်လ ပထမပတ် ရုပ်သံသတင်း
စိန်ခေါ်မှုများနဲ့ ဒုက္ခသည်ပညာရေး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လ...
ဘုရားသုံးဆူမြို့မှာ ပစ်ခတ်မှုနဲ့ ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်...
Human rights Council-Burma-Myanmar-Report of the W...
Suspect that find gold during dam constrution-vide...
မကြခင်ထွက်ခွါသွားတော့မည့် MKO ကျန်းမာရေးမှူး စဘွန်...
ထိတ်လန့်နေတဲ့ ဘုရားသုံးဆူ ကျောင်း ဈေးများပိတ်
မန္တလေး-ဗန်းမော်လမ်းပေါ်ရှိ 'ကျောက်လောင်း' သံတံတား အ...
FBR Reports- “Burma Army Attacks and Forced Labor ...
To All KAREN around the world!!!! Attention Please...
John McCain Visit Free Funeral Service Society Yan...
ATTENTION :Burma Democratic Concern (BDC) on Depae...
Burma-Myanmar8888(Unknown Heroes in Burma)-video b...
Shan Nationalities Democratic Party (SNDP) aka Whi...